250 qof oo rayad ah oo ku dhintey dagalladii ka dhacay Muqdishho iyo 160,000 oo ku barakacay. [Akhris …] – Radio Daljir
Juunyo 27, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, June 27 – Sida uu sheegey Guddiga Qaxootiga Caalamka ee QM illaa iyo 250 qof oo rayad ah aya ku dhintey dagaallo u dhaxeeyey DFKMG iyo dhaq dhaqaaqyada ka soo horjeeda dawladda, dagaalkaan oo ka dhacay Caasimaadda illaa iyo bishii hore.
Sidoo kale hay?addu waxaa ay sheegtey in dad gaaraya illaa iyo 160,000 oo qof ay ka barakaceen guryahooda tan iyo bilawgii bishii hore.
Warbixintan oo ay soo saartey hay?adda UNHCR maalintii Jimcaha ahayd ayaa waxaa lagu sheegey in ay ka walaacsantahay hay?adda waxyaabaha ka dhacaya dalka Soomaaliya iyo dhibaatooyinka soo gaaraya dadka rayadka ah.
Waxaa warbixinta lagu sheegey in ay wali jiraan dad ka sii barakacaya goobo horleh oo ku yaalla magaalada Muqdisho iyada oo halka dagaallada ay ka dhaceen toddobaadyo ka horna ay ka baro baxeen guryahooda dad aan dhawr iyo tobankii sano ee la soo dhaafey ka bixin magaallada.
Waxaana goobaha dagaalladu ay dhaceen ay ku macneeyeen in ay ahaayeen goobo xasilloona haddana ay yihiin kuwo haawanaya.
?Dirirtu waxaa ay reebtey dhibaato soo gaartey rayadka, bur bur iyo baro-kac hor leh? ayuu yidhi William Spindler oo ah afhayeen u Hadley guddiga sare ee qaxootiga Qaramada midoobey u qaabilsan.
Waxaa kale oo uu yidhi ? Marka la eego diiwaan gelinta ay sammeeyeen Cisbitaallada ku yaalla Caasimadda illaa iyo 250 qof oo rayad ah ayaa ku dhintey iska hor imaadyada waxaana dhaawacmey 900 oo qof tan iyo markii uu bilawdey bishii hore dagaalladii ka dhacayey magaalada Muqdisho.
Hay?adda waxaa ay sheegtey dadka barakacayaasha ah ee dhan 160,000 ee qof in ay ku jiraan 26,000 oo qof oo ka baro kacay dagaallada intii u dhaxeysey 19 iyo 22 bishan June ee aynu ku jirno.
Hay?addu waxaa ay ka deyrisey xaaladda dadka ka barakacaya magaalada Muqdisho waxaana ay sheegtey in lagu daabulo gawaari kiradooda ay aad u badan tahay, waxaa ay sheegtey UNHCR in gawaarida Mini Buska loo yaqaan ee Caasiga ah in lagu raaco illaa iyo 250 Doollarka Mareykanka ah.
Iyada oo aysan uga horreyn wax nolol ah deegaannada ay maciinka bidayaan, waxaanaba horey u jirtay xaalad aad u liidata oo ay ku sugnaayeen dadka ku sugan inta u dhaxeysa magaalada Muqdishho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.
Cabdifitaax Cumar Geeddi.
Ahlu sunna wal Jamaaca oo bandoo ku soo rogtey Cabudwaaq. [Akhris …]